UKZN Online Volume: 7 Issue: 27
YOUNG SCIENTIST MAKES HER MARK IN DRUG-RESISTANT TB RESEARCH
KUNXENXW’ ABAFUNDI UKUBA BAHLONIPHE AMALUNGELO ABANYE ABANTU
RESEARCH PRESENTED AT ANAESTHESIA CONGRESS IN EGYPT
CHALLENGES FACING UNIVERSITIES EXPLORED BY UKZN ACADEMIC
STUDENTS PROTEST AGAINST WOMEN AND CHILD ABUSE
SOCIETY OF COMMONS LAUNCHED
CANADIAN POSTGRADUATE SCHOLARS VISIT SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
PIETERMARITZBURG OPEN DAY FOR HUMANITIES STUDENTS A SUCCESS
UNkz Portia Greehy ovela e-iCap ethula inkulumo kubasebenzi kanye nabafundi emcimbini wokuqwashisa iRight to Respect obubanjelwe esikhungweni sase-Edgewood.
Uhlelo lwesandulela ngculazi kanye neNgculazi uqobo - HIV/AIDS e-UKZN ophikweni lase-Edgewood kamuva nje benze lokho esithi phecelezi – campaign ebihlose ukuthi ifundise umphakathi weNyuvesi mayelana nodlame oluqondiswe kwezobulili kanye nodlame kulabo abanobudlelwano.
Uhlelo lusebenzisana ngokubambisana nabafundisi babant’abasha baqoqele ndawonye izithameli ukuba nazo zidlale indima ebalulekile ekuthuthukiseni phambili kanye nasekuhlonipheni amalungelo abany’abantu, ukulwa nokucwaswa kanye nodlalme olubhekiswe kwezobulili.
Uhlelo lwaqaleka nje ngokuthi lube ingxoxo-mpikiswano phakathi kwabafundi ekutheni engabe uHulumeni wenza okwanele yini ekuqwashiseni nge-HIV/ AIDS kwezobulili. Labo abamele ongqingili, phecelezi – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) nabo bawavikelile amalungelo abo besho nokusho ukuthi bafuna ukuthi umphakathi ubaphathe kanjani.
Enkulumeni yakhe yokwamukela, uNksz Pinky Mnyaka utshele izethameli ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuhlonishwa, lokulalelwa, nokulingana kanye nokuzwana omunye nomunye. Ubakhumbuze ukuthi labo esithi bawongqingili nabo banendima enkulu abayidlalayo emphakathini ngalokho bayadinga ukuba bahlonishwe.
Ezinye zezikhulumi esingabala kuzo labo abaqhamuka kwi-iCap, umtholampilo wesikhungo –Asiphile Clinic kanye nabafundi abakhulume ngalokhu abahlangabezana nakho ezindaweni zabo zokuhlala baphinde banandisa kulo mcimbi. Ezikaqedisizungu ezifana nezinkondlo, amaculo kanye nezase shashalazini.
UNkk Portia Greehy uthe, inhlangano i-iCap, ihlose ukuba ifundise abesilisa abenza ucansi nabanye besilisa kodwa abangasibo ongqingili mayelana nesandulela ngculazi kanye nokwenza ucansi oluphephile. Uchaze lolu hlobo lomuntu njengalowo oshadile onabantwana kodwa ngasese azimbandakanye ebudlelwaneni nabanye besilisa bezitika ngocansi ikakhulukazi ebusuku.
UNksz Nana Dlamini, ongumfundi uqaphelise ozakwabo ngokulala nobaba abadala ukuze bathole imali kanye nobungozi bokusuleleka ngezifo zocansi phecelezi - STI.
uNksz Londeka Xulu naye oqhamuka kwi-iCap ukhulume ngokwesaba okungaba inzondo kulabo abawo ngqingili engaholela kudlame olunenzondo. Ukhele phezulu ngezigameko ezenzekayo mihla namalanga ezweni esingabala kuzo ukudlwengulwa, ukulinyazwa kanye nokubulawa okuphambene nobungqingili. ‘masilwe ndawonye nodlame oluyinzondo njengabahlali baseMzansi kusho oka Xulu.
Eminye imisebenzi ehlinzekwa iNyuvesi ihlanganisa ukuhlelwa komndeni kubona bobabili abesilisa nabesifazane kanye kokusokwa kwabesilisa.